कुवेत जान कञ्चनपुरको बाटो .. - TV Annapurna
कुवेत जान कञ्चनपुरको बाटो ..
January 5, 2018 January 5, 2018 TV-Annapurna
भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत पर्ने रुद्रपुरमा १ कात्तिक २०७४ मा सिन्धुपाल्चोकका ६ जना किशोरीलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ ग¥यो र कञ्चनपुरस्थित माइती नेपालको कार्यालयलाई जिम्मा लगायो । पक्राउ पर्ने टोलीमा एउटी यस्ती किशोरी थिइन्, जसको उमेर १४ वर्ष मात्र थियो । तर, नागरिकतामा भने उनी १९ वर्ष पुगेकी थिइन् । सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ घर भएकी ती किशोरीले विदेश जान पाइने लोभमा दलालको सल्लाह मानेर आफ्नो उमेर बढाएकी थिइन् ।
त्यो टोलीमा अर्की किशोरी १८ वर्षकी थिइन्, तर नागरिकतामा उनको उमेर २० वर्ष लेखिएको थियो । हेलम्बूकी ती किशोरीले पनि दलालले भनेअनुसार उमेर बढाएर नागरिकता बनाएकी थिइन् । उनीहरूलाई उमेर बढाएर नागरिकता बनाउन उक्साउने व्यक्ति सिन्धुपाल्चोककै रमेश तामाङ थिए, जो अहिले काठमाडौंमा बस्छन् । दुवै किशोराकी आमालाई तामाङले ‘छोरीलाई विदेश लगेर राम्रो काममा लगाइदिने’ लोभ देखाएपछि उनीहरूको उमेर बढाएर नागरिकता बनाइएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोकका किशोरी कञ्चनपुर हुँदै भारत पु¥याइएको यो पहिलो पटक होइन । माइती नेपाल कञ्चनपुर कार्यालयकी कार्यक्रम संयोजक महेश्वरी भट्टले सन् २०१६ देखि २०१७ को सेप्टेम्बरसम्ममा विभिन्न मुलुकमा बेचबिखनको लागि लैजान लागिएको अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकका ५० जना किशोरीलाई उद्धार गरिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “हामीले फेला पारेको संख्या मात्रै हो यो, लुकाई–छिपाई लगेका अरू कति होलान् कति ।”
दलालले देखाएको लोभमा परी उमेर बढाएर बनाइएका नागरिकता र राहदानीसहित सिन्धुपाल्चोकका चेलीहरू भारतमा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने उत्तराखण्ड राज्यको रुद्रपुर प्रहरीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, “नेपालबाट किशोरीहरूलाई विभिन्न बाटो भएर खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका लागि पठाउने गरिन्छ । नेपालमा यस कामका लागि भिसा नपाइने भएकाले उनीहरू दिल्ली विमानस्थल हुँदै जाने गन्तव्य तय गर्छन् ।”
भारतीय प्रहरीको विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारको नाममा ती किशोरीहरूलाई खाडी मुलुक पु¥याउने दलालहरूको नाम नै किटान गरिएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यो टोलीमा सिन्धुपाल्चोकका सोमबहादुर गोले, सिन्धुलीकी नानीमाया माझी र पर्साका विष्णु लोप्चन संलग्न छन् ।”
भारतीय प्रहरीको प्रेस विज्ञप्ति र नेपालका प्रहरी अधिकारीको बुझाइ एउटै छ– ‘चेलीबेटी ओसारपसार र बेचबिखनको शैली बदलिएको छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) विमलराज कँडेल भन्छन्, “जिल्लामा तीन वर्षयता मानव बेचबिखन सम्बन्धी उजुरीहरू आएकै छैनन् ।” उनले थपे “उजुरी नआउनु भनेको अपराध नै भएको छैन भन्ने होइन, अपराध नयाँ शैलीमा भइरहेको छ ।” डीएसपी कँडेलका भनाइमा, “मानव तस्करहरूले हिजोआज कागजात बनाएरै चेलीबेटी बेच्ने गर्छन् । उनीहरूले आवश्यक सबै प्रक्रिया यसरी पूरा गर्छन् कि बेचबिखन हो भन्ने थाहा पाउन मुश्किल पर्छ ।”
उनका अनुसार, बेचबिखनमा पहिले जस्तो लुकीछिपी सीमा कटाउने, कुनै कोठीमा वा घरमा पु¥याएर अरू कसैलाई जिम्मा लगाउने, नगद लिने जस्ता कामहरू सोझै नभएर वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने गर्छन् । कतिसम्म भने उमेर नपुगेका किशोरीलाई विदेश लैजान दलालहरूले उनीहरूको नागरिकता बनाउने प्रबन्ध समेत मिलाइदिन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा अहिले ‘सेटिङ’ भन्ने शब्द खूबै चर्चामा छ । यो सब गर्न दलालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समेत ‘सेटिङ’ मिलाउँछन् । नागरिकताका लागि वडा कार्यालयबाट उमेर बढाएर सिफारिश बनाइसकेपछि किशोरीहरू नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छन् ।
सिन्धुपाल्चोक सेलाङकी कोपिला तामाङ (नाम परिवर्तन) ले १४ वर्षमा ५ वर्ष उमेर बढाएर नागरिकता बनाइन् । उमेर बढाएर नागरिकता बनाएपछि दलालकै योजना अनुसार उनले राहदानी पनि उमेर बढाएरै बनाइन् । भारतमा उनीहरूको उद्धार गर्ने माइती नेपालको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयकी कार्यक्रम संयोजक महेश्वरी भट्ट भन्छिन्, “सिन्धुपाल्चोककै रमेश तामाङले विदेश जान सजिलो हुन्छ भन्दै कोपिला र उनकी आमालाई फकाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट नागरिकता र राहदानी निकाल्न लगाएका थिए ।”
दलालहरूले किशोरी र उनका अभिभावकलाई यतिसम्म आश्वस्त पारेका हुन्छन् कि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उनीहरू नागरिकता बनाउन आफ्नो उमेर पुगेको दाबी गर्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एकजना कर्मचारीकै भनाइमा, “शंका लागेर सोधपुछ गर्दा अभिभावक नै अघि सरेर ‘जन्माउने म, उमेर मलाई थाहा नभए कसलाई थाहा हुन्छ’ भन्न थालेपछि कर्मचारीहरूलाई थप प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्न ।”
उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिश समेत लिएर आएका हुन्छन् । अनि सरकारी अधिकारीहरूलाई उमेरबारे शंका लागे पनि नागरिकता दिनैपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पाण्डेले भने, “उमेर नपुगेको जस्तो लागेपछि हामी नागरिकता पछि बनाउँदा पनि हुन्छ, विदेश जानकै लागि उमेर ढाँटेर नागरिकता र पासपोर्ट नबनाउनुस् भन्छौं । तर, उनीहरूलाई यसरी तयार गरिएको हुन्छ कि जसरी पनि नागरिकता चाहियो भन्छन् ।”
प्रशासनबाटै नक्कली नागरिकता
१२ वर्षदेखि बेपत्ता
क्रमशः सिन्धुपाल्चोक, इर्खुकी सम्झना तामाङ, सिम्पालकाभ्रेकी सोममाया लमिनी र दुवाचौरकी कान्छी तामाङ । तस्वीर सौजन्यः सामी, सिन्धुपाल्चोक
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका (साबिक सिम्पालकाभ्रे गाविस) मा १२ वर्षअघि रामबहादुर बोम्जन तामाङ नामका दलाल पुगे । विदेश जान चाहने महिला खोज्दै हिंडेका उनले सिम्पालकाभ्रेकी सोममाया लमिनीलाई ‘कुवेत लगेर काम लगाइदिने’ लोभ देखाए, अनि सँगै लिएर गए । सोममाया १२ वर्षअघि घरबाट हिंडेदेखि अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन् ।
आमा बेपत्ता भएपछि उनलाई खोज्दै कुमार लामा कुवेतसम्म पुगे । तर, केही अत्तोपत्तो लागेन । “आमालाई विदेश लैजाँदा १४ वर्षको थिएँ” २६ वर्षीय लामाले भने, “ठूलो भएपछि खोज्न कुवेतसम्म पुगें, तर पत्ता लगाउन सकिनँ ।” दलाल रामबहादुर बोम्जन तामाङको घर सिन्धुपाल्चोककै हेलम्बू गाउँपालिका (साबिक पालचोक गाविस) हो । अहिले उनी कुवेतमै बस्छन् ।
सिन्धुपाल्चोककै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका (साविक इर्खु गाविस) की सम्झना तामाङ ७ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । वैदेशिक रोजगारको लागि भनेर २०६७ सालमा यूएई गएकी उनी त्यसयता सम्पर्कमा छैनन् । ९ वर्षअघि मलेशिया गएकी पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका (साबिक गुन्सा गाविस) की ५२ वर्षीया कान्छी तामाङको पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
सिन्धुपाल्चोक, इचोककी सन्तोषी तामाङ (नाम परिवर्तन) लाई आठ वर्षको छँदा उनकी काकीले काममा लगाइदिन्छु भनेर भारतको दिल्ली लिएर गइन् । त्यहाँ राम्रो काम नपाएपछि उनले एकजना भारतीयको घरमा घरेलु श्रमिकको काम गर्न थालिन् । केही समयपछि नै उनीमाथि शोषण हुन थाल्यो । शारीरिक शोषणबाट विक्षिप्त बनेकी सन्तोषीले दिल्लीमै युवराज लामा नाम गरेका दलाललाई भेटिन् ।
युवराजलाई भेटेपछि सन्तोषीले ठानिन्– ‘अब विदेश जान पाइने भयो ।’ युवराजले उनलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पठाइदिने आश्वासन दिए । तर, सन्तोषीसँग नागरिकता र राहदानी थिएन । नागरिकता र राहदानी बनाइदिन युवराज सन्तोषीलाई लिएर सिन्धुपाल्चोक आए । सन्तोषीसँगै युवराजले अरू चार युवतीलाई पनि सिन्धुपाल्चोक ल्याएका थिए । उनीहरूलाई चौताराको एक होटलमा राखियो । सन्तोषीले २३ असोज २०७४ मा सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेकी छन्, “एक घन्टाभित्रै युवराज दाइले पाँच जनाको नागरिकता र पासपोर्ट ल्याउनुभो । त्यसपछि हामीलाई दिल्ली नलगी मुम्बई लैजानुभयो ।”
सिन्धुपाल्चोक प्रहरीका अनुसार, मुम्बई पुगेको दुई हप्तापछि सन्तोषी बाहेक अरू चार युवतीलाई युवराजले दुबई पठाए । सन्तोषीलाई दुई÷तीन वर्ष साथमै राखे । सन्तोषी र युवराजको सम्बन्धबाट एउटा बच्चा पनि जन्मियो । सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई सन्तोषीले बताए अनुसार, तीन वर्षको भएको उनको बच्चा युवराजले अरू कसैलाई बेचिदिए र उनलाई दुबई पठाए ।
दुबईमा केही समय काम गरेपछि छुट्टी लिएर नेपाल फर्किने क्रममा भारतको सिलगुडीमा सन्तोषीको राहदानी हरायो । फेरि दुबई फर्किन उनलाई राहदानी चाहिन्थ्यो । अर्को राहदानी बनाउन २०७४ असोजमा उनी काठमाडौं गइन् । राहदानी विभागमा फारम बुझाउँदा फाँटवालाले सक्कली नागरिकता मागे । सन्तोषीले नागरिकता बुझाइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको अभिलेखसँग भिडाउँदा थाहा भयो, उनको नागरिकता किर्ते रहेछ ।
सन्तोषी पक्राउ परिन् । सिन्धुपाल्चोक प्रहरीमा दिएको बयानमा उनले भनेकी छन्, “नागरिकतामा सहीछाप मैले गरेकी हुँ, म आफैं सिडिओ कार्यालयमा गएकी चाहिं थिइनँ ।” उनले युवराजले नागरिकता बनाएर होटलमै ल्याइदिएको र आफूले होटलमै सहीछाप गरिदिएको बताइन् । प्रहरी अनुसन्धानले सो नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्ने प्रभाकर आचार्य नामका व्यक्ति सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म कार्यरत छैनन् । सन्तोषीको नागरिकता नम्बर पनि कार्यालयको ढड्डामै नभएको नम्बर हो ।
तर, नागरिकतामा भएको सरकारी छाप र होलोग्राम भने सक्कली थियो । यसले के देखाउँछ भने चाहिए अनुसारको नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन दलालहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि राहदानी विभागसम्मै ‘च्यानल’ मिलाएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका डीएसपी कँडेल भन्छन्, “चानचुने मान्छेले यो काम गर्नै सक्दैन । युवराज लामा भन्ने व्यक्ति ठूलै गिरोहमा संलग्न हुनुपर्छ ।” कँडेलका बुझाइमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत च्यानल नभई यस्तो काम गर्न सम्भव छैन ।
दलालहरूले ‘सेटिङ्ग’ मिलाउँदा खूबै होश पु¥याएको देखिन्छ । यस्ता नागरिकता र राहदानीमा हुने होलोग्राम र सरकारी छाप सक्कली नै हुँदोरहेछ । सिन्धुपाल्चोकमा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीको ठाउँमा हुँदै नभएको मान्छेको नाम उल्लेख भएको भेटियो । यसो गर्दा नागरिकता र राहदानी किर्ते गर्ने दलाल र उनीहरूसँग मिलेमतो गर्ने सरकारी अधिकारी को हुन् भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो हुन्न ।
नागरिकता र राहदानीमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर र औंठाछाप सक्कली हुने भएकोले विमानस्थलहरूमा विश्वास गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसरी ‘चोरबाटो’ बाट बनाइएका नागरिकता तथा राहदानी दलालहरूले आफूसँग राख्ने गर्दा रहेछन् । जस्तो कि, यूएई पठाउनु छ भने विमानस्थलमा पुगेपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहदानी र नागरिकता दिइन्छ । ताकि, त्यसभन्दा अघि आफ्नो अपराध ‘लिक’ नहोस् ।
मोबाइलमा भिसा, फोटोमा मोलतोल
विदेशमा राम्रो काम पाइन्छ भनेर किशोरी र तिनका अभिभावकहरूलाई लोभ देखाए पनि दलालको वास्तविक धन्दा चाहिं अर्कै हुने गर्छ । कतिसम्म भने, उनीहरू किशोरीको तस्वीर देखाएर यो केटी उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर पनि कारोबार गरिरहेका हुँदारहेछन् । वैदेशिक रोजगारको नाममा लामो समयदेखि चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न पर्साका विष्णु लोप्चनले भारतीय प्रहरीलाई आफूले नेपाली युवतीहरूका तस्वीर पठाएर विदेशी ग्राहकसँग मोलमोलाइ गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
भारतीय प्रहरीको हिरासतमा रहेका लोप्चनले बयानमा कसरी चेलीबेटी विदेश पठाउने गरिन्छ भन्ने गुह्य खोलेका छन् । भारतीय प्रहरी टोलीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेकी माइती नेपालको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयकी प्रमुख महेश्वरी भट्टले लोप्चनले भारतीय प्रहरीमा दिएको बयान हेरेकी छन् । उनका भनाइमा, लोप्चनले भारतीय प्रहरीसँगको बयानमा ‘केटीका फोटोहरू दुबईका ग्राहकलाई पठाउँछु, जुन राम्रो मान्छन् उसैलाई पठाउने हो, त्यसबापत राम्रो रकम पाइन्छ’ भनेका छन् ।
भारतीय प्रहरीको विज्ञप्तिबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । लोप्चनले भारतीय प्रहरीसँगको बयानमा ‘विदेश जान चाहने युवतीका तस्वीरहरू संकलन गरी यूएईका शेखहरूलाई पठाउने र उनीहरूले जुन मन पराउँछन् उसलाई विदेश पठाउने गरेको’ उल्लेख गरेका छन् । पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयान भन्दै भारतीय प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ‘उनीहरूको भिसा मोबाइलमा आउँछ, त्यसपछि पठाइएका किशोरीहरू के गर्छन् ? फर्किन्छन् वा फर्किन्नन् हामीलाई थाहा हुन्न’ भनेको उल्लेख छ ।
कुनै वेला चेलीबेटी बेचबिखनको गन्तव्य भारत हुने गथ्र्यो । अब, भारत मात्र त्यो गन्तव्य रहेन । अहिले सिन्धुपाल्चोकका चेलीबेटी बेचिने मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुक बनेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार, वैदेशिक रोजगारका नाममा यहाँका चेलीबेटी ओमन, मलेशिया, यूएई, कतार, कीर्गिस्तान, कुवेत, साउदी अरेबिया, सिरिया, लेबनानलगायतका देशमा समेत गइरहेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत पाण्डे भन्छन्, “हेर्दा दलाल वा म्यानपावर कम्पनीबाट रोजगारीको लागि विदेश गएको जस्तो देखिन्छ । वास्तविकता बेचबिखन नै हो ।”
नेपालमा चेलीबेटी बेचबिखन धेरै हुने जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ, सिन्धुपाल्चोक । प्रहरीको अभिलेख अनुसार वि.सं. २००० मा यहाँ पहिलोपल्ट चेलीबेटी बेचबिखनमा उजुरी दर्ता भएको थियो । सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी भेगका गाउँबाट तुलनात्मक रूपमा धेरै किशोरी बेचबिखनमा पर्ने गरेको प्रहरी र प्रशासनको बुझाइ छ । कारण, ती गाउँहरूमा गरीबी व्याप्त छ, चेतनाको कमी छ । प्रहरीको उपस्थिति कम हुने भएकोले दलालले उनीहरूलाई निर्धक्क प्रलोभनमा पार्न सक्छन् । बेचिनेहरूमा प्रायः तामाङ समुदायका किशोरी र युवती छन् ।
प्रहरी तथ्याङ्क हेर्दा, हेलम्बू गाउँपालिका अन्तर्गतका हेलम्बू, इचोक र महाँकाल, जुगल गाउँपालिकाका गोल्चे, गुम्बा र हगाम तथा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाअन्तर्गतका बासखर्क, बरुवा, भोताङ, गुन्सा, थाङपालकोटलगायतका गाउँका धेरै चेलीबेटी बेचबिखनमा परेका छन् । “नपढेका र गरीब परिवारलाई फकाउन दलाललाई सजिलो हुन्छ” जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायव निरीक्षक ख्याली सिंहले भने, “यस्ता सोझा महिला बेचबिखनमा धेरै पर्ने गरेका छन् ।”
महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा धेरै जाने जिल्लामा झापापछि दोस्रो नम्बरमा पर्छ, सिन्धुपाल्चोक । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०६७ सालयता सिन्धुपाल्चोकका ७ हजार ७७० महिला वैदेशिक रोजगारका लागि भनेर विभिन्न देशमा गएका छन् । २०७३÷७४ मा मात्रै सिन्धुपाल्चोकका दुई हजार २० जना महिला वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्याङ्क विभागसँग छ । तर, सूचना परामर्श लिएर, सीप सिकेर विदेश जाने महिलाको संख्या निकै कम छ । वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी), सिन्धुपाल्चोकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७३/७४ सम्म जम्मा १४४ जनाले मात्र विदेश जानुपूर्व सीप सिकेका छन् । यसरी सीप र सूचना बेगर दलालहरूको फन्दामा परेर विदेश गएका महिला अनेक समस्यामा पर्छन् ।
सामी, सिन्धुपाल्चोककी संयोजक रीना श्रेष्ठले रोजगारीको लागि भन्दै विदेशमा बेचिएका महिलामाथि यौनशोषण लगायतका शारीरिक शोषण हुने गरेको, तोकिएको भन्दा वेग्लै र अप्ठेरो काममा लगाउने गरिएको बताइन् । महिलाहरू वैदेशिक रोजगारको नाममा बेचिएका, बेपत्ता भएका, ठगिएका, राहदानीलगायतका महत्वपूर्ण कागजात जफत गरिएका र ज्यान समेत गुमाएका घटना सामी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार, २०७१÷७२ यता मात्र ८३ वटा यस्ता घटना दर्ता भएका छन्, जसमध्ये पाँचजना महिला अहिलेसम्म बेपत्ता छन् ।
कानूनी प्रश्न : बेचबिखन कि ठगी ?
चेलीबेटी बेचबिखनको हिजोको तौरतरिका पूरै बदलिएको छ । अब त्यो सब वैदेशिक रोजगारको आवरणमा हुन थालेको छ । र, वैदेशिक रोजगारकै नाममा मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी भइरहेको छ । तर, यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने व्यवस्था विद्यमान कानूनमा छैन । मानव बेचबिखनको यो नयाँ स्वरुपलाई न ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ ले समेट्छ, न ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४’ ले । वैदेशिक रोजगार ऐनमा मानव बेचबिखनबारे केही उल्लेख छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने बेचबिखनलाई स्पष्ट पारिएको छैन । त्यहीकारण वैदेशिक रोजगारको नाममा मानव बेचबिखन गर्नेमाथि कुन कानून आकर्षित हुने र कस्तो कारबाही हुने भन्ने अन्योल छ । यसले गर्दा मानव तस्करहरूले वैदेशिक रोजगारको नाममा मानव बेचबिखन गर्ने छूट पाइरहेका छन् ।
२०७४ कात्तिक १ गते भारत उत्तराखण्डको रुद्रपुरबाट भारतीय प्रहरी र माइती नेपाल, कञ्चनपुरले उद्धार गरेका किशोरीहरु र प्रहरीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती । तस्वीर सौजन्यः माइती नेपाल कञ्चनपुर कार्यालय
‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४’ अनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले महिला तथा बालबालिकालाई यौन शोषणको लागि बेच्नु भन्ने बुझिन्छ । ऐनमा उल्लिखित मानव बेचबिखन सम्बन्धी परिभाषाले रोजगारीको नाममा अहिले भइरहेको बेचबिखनलाई समेट्दैन । ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ ले वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने बेचबिखनका घटनालाई ठगीको रूपमा परिभाषित गर्छ । अर्थात्, वैदेशिक रोजगारको लागि भन्दै विदेशमा लगेर बेचबिखन गर्ने कार्य कानूनतः ‘व्यक्ति वा म्यानपावर कम्पनीको ठगी’ मात्रै हो भन्ने बुझिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू बेचबिखनमा पर्दा समेत दलाललाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुँदा कम सजाय हुने गर्छ । कानूनतः मानव बेचबिखनको कसूरमा २० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगारमा ठगी गरेको कसूरमा भने ३ देखि ७ वर्षसम्म मात्रै कैद हुने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा भइरहेको मानव बेचबिखनलाई ठगी भन्ने कि बेचबिखन भन्नेबारे ऐनमै रहेको विरोधाभास अन्त्य गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी मोहन अधिकारी बताउँछन् ।
“संशोधित मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाइएको छ” अधिकारी भन्छन्, “अहिले संसद् नरहेकाले अलपत्र प¥यो, अब चुनावपछि संशोधन होला ।” महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी उपसचिव रोसनीदेवी कार्कीले पनि ऐनमा रहेको अन्योल हटाउन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको बताइन् । कार्कीका अनुसार, विकराल बन्दै गइरहेको मानव बेचबिखनको समस्या सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
गैरसरकारी संस्था केआई नेपालकी अध्यक्ष प्रभा घिमिरे मानव बेचबिखन भनेको यौन शोषणका लागि महिला बेच्ने कार्य हो भन्ने बुझाइले गर्दा वैदेशिक रोजगारका नाममा चेलीबेटी बेच्नेहरूलाई कारबाही गर्न अप्ठेरो भइरहेको बताउँछिन् ।
घिमिरेले भनिन्, “बेचबिखनको शैली फेरिएकाले वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, ओसारपसार र मानव तस्करीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझेर नयाँ ऐनमा कारबाहीको प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको अभियान चलाउँदै आएको गैरसरकारी संस्था पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङ्ग बेचबिखनलाई ठगीमा मात्रै कारबाही हुनु पीडकलाई जोगाउनु हो भन्ने ठान्छिन् । “पासपोर्ट लिएर विदेश गए पनि यो बेचबिखन नै हो” उनले भनिन्, “रोजगारीको अनुमति पत्र नदिने तर पासपोर्ट हातमा थमाएर लुकीचोरी विदेश पठाउने कामलाई ठगी मात्रै भन्नु हुन्न ।”
-प्रमोद आचार्य: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
बिशेष, साताका लोकप्रिय समाचार
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुँदैन् : निगम
कठ्यांग्रिएर मधेसमा एक सातामा ९ को मृत्यु, जनजीवन कष्टकर
September 18, 2018 Annapurna TV 0
तुल्सी अर्याल, टिभी अन्नपूर्ण सरकारले सेवा सुविधामा विभेद गरेको भन्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले मंगलबार राजधानीमा प्रदर्शन...
कन्या अर्थात् आश्विन सङ्क्रान्तिका दिन आज कालीगढले विश्वकर्माको पूजाआजा गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदैछन्। द्वापर युगमा भगवान्...
September 14, 2018 TV-Annapurna 0
भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शो आज चौथो दिन पनि जारी रहेको छ । नाडा अटो शोमा...
September 13, 2018 Annapurna TV 0
तुल्सी अर्याल, टिभी अन्नपूर्ण । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगे पछि पुनःनिर्माण गर्ने...
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग कही मात्रामा बढेपछि सरकारले आवश्यक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने...
September 12, 2018 TV-Annapurna 0
September 12, 2018 Annapurna TV 0
हुन्डाईको इलेक्ट्रिक कार आयोनिक नेपाली बजारमा
बढ्दो प्रदुषण र नेपाली बजारलाई लक्षित गर्दै हुन्डाईले पहिलो पटक इलेक्ट्रिक कार आयोनिक प्रदर्शन गरेको छ...
एक्सक्लुसिभ अपाचे आरआर ३१० सार्वजनिक
भृकुटीमण्डपमा मंगलबारबाट सुरु भएको नाडा अटो शो २०१८ मा टीभीएसले आफ्नो सुपर प्रिमियम मोटरसाइकल अपाचे आरआर...
September 11, 2018 TV-Annapurna 0
नाडा अटो शोको २०१८: सवारीको कुम्भ मेला यस्तो देखियो फोटोमा
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । यसपटकको अटो शोमा १९ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र २० वटा...
टिभिएस मोटर कम्पनीले ल्यायो सुपर प्रिमियम मोटरसाइकल
टिभिएस अपाचे आर आर ३१० नाडा अटो शो २०१८ मा सार्वजनिक भएको छ। टिभिएस अपाचे आर...
September 11, 2018 Annapurna TV 0
सवारी साधनको कुम्भ मेलाःकाठमाडौंमा सुरु, पाँच अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा
नाडा अटो सो ’२०१८’ काठमाडौंमा सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अटो सोको उद्घाटन गरेका...
नाडा अटो शो २०१८ः १९ ब्राण्डका ४ पांग्रे र २० ब्राण्डका २ पांग्रे सवारी प्रदर्शनमा
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो शो २०१८ मंगलवारबाट सुरु भएको छ । आगामी भाद्र ३१ गते सम्म...
नाडा अटो शोः छुटको प्रतिस्पर्धा
मंगलवारबाट काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा नाडा अटो शो सुरु भएको छ । हरेक वर्ष हुने नाडा अटो...
September 09, 2018 Annapurna TV 0
तुल्सी अर्याल ,टिभी अन्नपूर्ण । काठमाडौंका कलेजमा विद्यार्थीहरुलाई तह लगाउने डि आईहरु छन् । हुनत उनिहरुका काम...
तुल्सी अर्याल ,टिभी अन्नपूर्ण हिन्दु महिलाहरुको ठूलो पर्व तीज सुरु हुन एक महिना अघि देखि दरको नाममा...
August 31, 2018 Annapurna TV 0
टिभी अन्नपूर्ण ,काठमाडौं । काठमाडौं ठमेलमा बस्दै आएका आयुशको दुवै पाखुरामा ट्याटु छन् । प्रेम...
भिडियो साताका लोकप्रिय समाचार
August 31, 2018 TV-Annapurna 0
बिमिस्टेक : चीन र पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारत नीति
बे अफ बंगाल इनिसियटिभ फर मल्टी टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक कोअपरेशन ‘बिमस्टेक’ को चौथो सम्मेलन शुक्रबार काठमाण्डौ...
August 29, 2018 TV-Annapurna 0
शर्मिला सुवेदी । नेपालमा गएका केही महिनामा गर्भपतनको डरलाग्दो तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । यसमा पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले...
शर्मीला सुवेदी, टिभी अन्नपूर्ण । नेपालमा वीर्य बेच्ने पुरुष नभेटेपछि काठमाण्डौका केही अस्पतालमा सुरु भएको डोनरमार्फत गरिने...
सरिता खड्का, टिभी अन्नपूर्ण । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थ व्यवस्थाका कारण...
August 28, 2018 TV-Annapurna 0
इन्टरनेटका कारण परम्परागत मिडियामाथि धर्मसङ्कट
पेरिस युद्ध रिपोर्टिङ र खोज पत्रकारिता गरिरहेका धेरै मिडियाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति अझ सिर्जना हुँदै...
August 27, 2018 Annapurna TV 0
सहरका समलिंगीहरु सडकमा उत्रिएपछि यस्तो देखियो (भिडियोसहित)
आज गाईजात्रा राजधानी सहित नेवार समुदायको बाहुल्यता भएका विभिन्न क्षेत्रमा यो पर्व मनाइएको छ । राजधानीमा...
August 27, 2018 TV-Annapurna 0
पुलका खाँबा हेर्दै नदीमा हेलिँदाको आधा दशक
-प्रकाश सिलवाल/बालाराम खड्का चालक गाडी चलाइरहेका हुन्छन् तर, तिनका मुटुले ठाउँ छोडिसकेको हुन्छ । गाडीमा सवार...
August 26, 2018 Annapurna TV 0
टिभी अन्नपूर्ण,काठमाण्डौं । जटिल तथा निको नहुने रोगमध्ये एक एचआइभी एड्स पनि हो । अहिले सम्म...
August 24, 2018 Annapurna TV 0
स्वर्गीय निर्मलालाई विजय ज्ञवालीको मार्मिक पत्रः बहिनी तिम्रो हत्यारा हाईप्रोफाईलवाला हो !
बिजय ज्ञवाली । प्रिय बहिनी निर्मला, अव तिमी यो धर्तीमा त छैनौं। तर तिमी यसै धर्तीमा...
August 23, 2018 Annapurna TV 0
यस्तो बन्दैछ नेपालकै पहिलो नेटवर्क आर्क ब्रिज (भिडियोसहित)
तुल्सी अर्याल , टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौँको बिजुली बजारको धोबी खोला र तीनकुनेको बागमती नदीमाथि नेपालमै पहिलो...
August 22, 2018 TV-Annapurna 0
धन बिनाको मन ठुलो कि मन बिनाको धन ? तर्क गर्नुहोस् र रिचार्ज कार्ड जित्नुहोस्
पछिल्लो समय धन बिनाको मन ठुलो की मन बिनाको धन निक्कै ठुलो बहसको विषय बन्न...
August 22, 2018 Annapurna TV 0
कोरिया जानु अघि स्वास्थ्यबारे बुझ्नैपर्ने कुरा (भिडियोसहित)
तुल्सी अर्याल , टिभी अन्नपूर्ण पछिल्ला केहीवर्ष दक्षिण कोरिया नेपालीहरुको लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य भइरहेको छ...
August 21, 2018 TV-Annapurna 0
धूमपान गर्ने अभिभावकका सन्तानलाई ‘दीर्घकालीन असर’
एउटा अमेरिकी अनुसन्धानले धूमपान गर्ने अभिभावकसँगै हुर्किएका चुरोट नपिउने केटाकेटीहरूमा वयस्क भएपछि फोक्सोसम्बन्धी गम्भीर रोगका कारण...
August 18, 2018 Annapurna TV 0
राजधानी प्रवेशको मुख्य नाका कलंकीमा हुने जाम घटाउन भन्दै निर्माण सुरु गरिएको अण्डरपास निर्माण सम्पन्न भएको...
August 16, 2018 Annapurna TV 0
August 16, 2018 TV-Annapurna 0
August 14, 2018 TV-Annapurna 0
अस्ट्रेलियाको मेलबोर्न सिटी विश्वको दोस्रो उत्कृष्ट शहर हेर्नुहोस् पहिलोमा कुन ?
यस वर्ष भएको वार्षिक सर्वेक्षणमा अष्ट्रियाको राजधानी भियना विश्वकै बस्नलायक अर्थात् सुन्दर शहरको सूचीमा एक नम्बरमा...
August 13, 2018 TV-Annapurna 0
नुहाए लगत्तै यसो गर्ने बानी छ भने आजै त्याग्नुहोस्
कपाल धुने वा नुहाउनेबित्तिकै कतिपय मानिसले जानी–नजानी गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा गर्ने स–साना गल्तीले...
मृत बच्चा बोकेर १७ दिनसम्म भौँतारिएको ह्वेल …
एउटा किलर ह्वेलले आफ्नो मृत नवजात बच्चा लिएर समुद्रमा १७ दिनसम्म भौँतारिएको र त्यसक्रममा उसले १६...
शर्मिला सुवेदी /टिभी अन्नपूर्ण साउनको अन्तिम शनिबार । राती करिब १० बजेको थियो । नारायणहिटी दरबार...
गृहमन्त्रीलाई असफल बनाउन पूर्व माओवादीकै चलखेल, प्रकाण्ड पक्राउको विषय पेचिलो बन्दै
विनोद देवकोटा, टिभी अन्नपूर्ण । शसस्त्र बिद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र तत्कालिन झापा बिद्रोहका नाईके केपी...
तुल्सी अर्याल, टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौँ । बलात्कार महिला हिंसाको एउटा विकृत रुप हो । महिलामाथि हुने...
August 11, 2018 TV-Annapurna 0
यी व्यक्तिले किर्तिमानी राख्न यसोसम्म गरे
बुल्गारिया ६४ वर्षका येन पत्कोभले नयाँ किर्तिमान राखेका छन् । जीवनभर अरुलाई पौडी सिकाएका उनले आफ्नो...
प्रवास / विश्व बिशेष
तपाईको ढाड दुख्छ ? हड्डी खिइएको हुनसक्छ यस्तो छ यसबाट जोगिने डाक्टरको सल्लाह
सामान्यतया गर्धनको पछाडीदेखि नितम्बसम्मको भागलाई ढाड भनिन्छ । यही भागमा समस्या भई हुने पीडालाई ढाड दुखाई...
बिशेष रोचक जानकारी
यी हुन् विश्वका अर्बपति महिलाहरु, जसको सम्पति १० खर्ब अमेरिकी डलर छ
यो वर्ष अर्बपतिहरुको सूचीमा अर्को रेकर्ड बनेको छ । विश्वभरको अर्बपति हुने महिलाहरुको सङ्ख्यामा उल्लेख्य बढोत्तरी...
August 10, 2018 Annapurna TV 0
विमल खड्का, टिभी अन्नपूर्ण । मुलुकको एक मात्रै विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक रुपमा हजारौँ मानिसहरुको आवत...
August 09, 2018 Annapurna TV 0
विमल खड्का, टिभी अन्नपूर्ण । काठमाडौँमा सुत्केरीको सालनालबाट निकालिएको ग्यासबाट खाना पाक्ने गरेको छ । सरकारी...
August 07, 2018 TV-Annapurna 0
घातक अवस्थामा पृथ्वीको तापक्रम
पृथ्वीको तापक्रम घातक अवस्थामा पुगेको एक विवरणले देखाएको छ । तापक्रम घटाउनका लागि अहिले विश्वव्यापीरुपमा विभिन्न...
August 04, 2018 Annapurna TV 0
पर्यटकहरुलाई अजिंगरको मसाज
डाभोआ, फिलिपिन्स फिलिपिन्सको चिडियाखाना घुम्न आउने पर्यटकहरूले उक्त चिडियाखानाको अजिंगरबाट मसाजको सुविधासमेत प्राप्त गर्ने भएका छन्...
हेर्नुहोस यसकारण बढेन तपाईँको तलब
विश्व समुदाय तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा दौडिरहेको छ । लगानीको मात्रा पनि वर्सेनि बढेको छ ।...
August 03, 2018 TV-Annapurna 0
बच्चाको मानसिक विकासका लागि यी खाना खुवाउनुस्
बच्चाको शरीरको विकास उसको खानपानमा निर्भर गर्छ । यसका साथै मानसिक विकास पनि स्वस्थ र पौष्टिक...
August 02, 2018 Annapurna TV 0
विमल खड्का टिभी अन्नपुर्ण काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण शाखा रत्नपार्कमा जडान गरिएको विद्युतीय सवारीका...
बिशेष साताका लोकप्रिय समाचार
च्याम्पियन्स लिग फुटबलः लिभरपुलको प्रभावशाली सुरुवात
संविधान बनेको तीन वर्षः अब देखि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाइने
बलात्कार र हत्या अभियुक्त पाँच जनालाई सफाइ
निर्मला हत्या काण्डःअनुसन्धानको दायरमा स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधिसँगै प्रहरीकै अधिकारी
एसिड आक्रमण बढ्दै, फेरि ६ महिने बालकमाथि प्रहार
रूसी विमानमाथि आक्रमण, १५ जनाको मृत्यु
शून्य लागतमा कामदार आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह
मलेशिया जाने गरिब नेपालीको ५ अर्ब लुटियो (भिडियोसहित)
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको करोडौँ आम्दानीको स्रोत गुम्दै (भिडियो सहित)